XAUUSD (Daily) 28-01-2018 – Myanmar Forex Villa
XAUUSD (Daily) 28-01-2018
By Phoenix T 28/01/2018 Category: Technical Analysis
XAUUSD Daily Chart ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဈေး ၁၃၆၅.၉၅ ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း ၃ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ၁၇လ အကြာမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့မှာဘဲ ၁၇ လအတောအတွင်းမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး Resistance Level လဲဖြစ်တဲ့ ၁၃၆၅.၉၅ ကိုထိပြီး Bounce ပြန်ဖြစ်ခဲ့ကာ ၁၃၄၂.၂၁ ထိ အနိမ့်ဆုံး ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၃၄၈.၁၅ မှာ ဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Resistance Zone / Resistance Level ဆိုတာ Seller များ ကြီးစိုးရာ နယ်မြေများဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာနေ့မှာတော့ ၁၃၄၈.၁၅ နဲ့ ဈေးပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီး အမြင့်ဆုံး ၁၃၅၇ ထိရောက်ခဲ့ကာ ၁၃၅၀.၆၆ နဲ့ ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါ။
သောကြာနေ့ရဲ့ ဈေးသွားလာပုံကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်….
သောကြာနေ့ ဈေးဖွင့်ချိန်ကတည်းက မနေ့က(ကြာသပတေး)ရောက်ခဲ့တဲ့ ဈေးထိသွားဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် Seller တွေရဲ့ တိုက်စစ်ကို မယှဉ်နိုင်တဲ့အတွက် လိုချင်တဲ့ ပွိုင့်အထိ တက်ရောက်သိမ်းပိုက်ခွင့်မရခဲ့ဘဲ….. အတက် အနည်းငယ်နဲ့သာ ဈေးပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။
Resistance Level များကတော့…..
Resistance Level 1 – 1357.79
Resistance Level2– 1366.40
Resistance Level3– 1391.23 တို့ဖြစ်ကြပြီး
Support Level များကတော့…..
Support Level 1 – 1342.21
Support Level2-1333.82
Support Level3-1324.14 တို့ဘဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Resistance Zone ကို ထိပြီး Bounce ဖြစ်လာခြင်း
ကြာသပတေးနေ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံးဈေးထိ ရောက်အောင်မတက်နိုင်ဘဲ ပြန်ကျလာခြင်း
လက်ရှိဈေး၏ အောက်ဘက်တွင် Buyer များကြီးစိုးရာ နယ်မြေရှိနေခြင်း
တို့ကြောင့် ဈေးပြန်တက်ဖို့ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် Support Level2နဲ့3အထိ ရောက်အောင် ဆင်းပြီး ပြန်လည် အားယူလိမ့်ဦးမယ်လို့ ယူဆချင်ပါတယ်။
Weekly Chart နဲ့ လေ့လာကြည့်မယ် ဆိုရင်လဲ Triangle Resistance ကို ထိပြီး Bounce ဖြစ်လာသော Candle Stick Pattern ဟာ Shooting Star အလှအပကြီး မဟုတ်ပေမယ့် Resistance Bounce နဲ့ တွဲပြီး ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုတော့ ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာတော့ သေချာနေပါတယ်။
ယခု Post လေးဟာ Traders များအတွက် အကျိုးရှိတယ်လို့ ယူဆမိရင် Like, comment, share များ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ နောက်ထပ် TA Post လေးတွေ ရေးဖို့ အတွက် အင်အားများ ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
28-01-2018 (06:35 AM)
XAUUSD Daily Chart ကိုလလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ ပွီးခဲ့တဲ့ ကွာသပတေးနကေ့ အမွငျ့ဆုံးရောကျရှိခဲ့တဲ့ဈေး ၁၃၆၅.၉၅ ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈ ၈ လပိုငျး ၃ ရကျနနေ့ောကျပိုငျး ၁၇လ အကွာမှာ ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ပွနျလညျ ရောကျရှိခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ကွာသပတေးနမှေ့ာဘဲ ၁၇ လအတောအတှငျးမှာ အမွငျ့ဆုံးဖွဈပွီး Resistance Level လဲဖွဈတဲ့ ၁၃၆၅.၉၅ ကိုထိပွီး Bounce ပွနျဖွဈခဲ့ကာ ၁၃၄၂.၂၁ ထိ အနိမျ့ဆုံး ရောကျခဲ့ပွီး ၁၃၄၈.၁၅ မှာ ဈေးပိတျသှားခဲ့ပါတယျ။ Resistance Zone / Resistance Level ဆိုတာ Seller မြား ကွီးစိုးရာ နယျမွမြေားဖွဈပါတယျ။ သောကွာနမှေ့ာတော့ ၁၃၄၈.၁၅ နဲ့ ဈေးပွနျဖှငျ့ခဲ့ပွီး အမွငျ့ဆုံး ၁၃၅၇ ထိရောကျခဲ့ကာ ၁၃၅၀.၆၆ နဲ့ ဈေးပိတျခဲ့တာပါ။
သောကွာနရေဲ့ ဈေးသှားလာပုံကို လလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ….
သောကွာနေ့ ဈေးဖှငျ့ခြိနျကတညျးက မနကေ့(ကွာသပတေး)ရောကျခဲ့တဲ့ ဈေးထိသှားဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ Seller တှရေဲ့ တိုကျစဈကို မယှဉျနိုငျတဲ့အတှကျ လိုခငျြတဲ့ ပှိုငျ့အထိ တကျရောကျသိမျးပိုကျခှငျ့မရခဲ့ဘဲ….. အတကျ အနညျးငယျနဲ့သာ ဈေးပိတျခဲ့ရပါတယျ။
Resistance Level မြားကတော့…..
Resistance Level3– 1391.23 တို့ဖွဈကွပွီး
Support Level မြားကတော့…..
Support Level3-1324.14 တို့ဘဲ ဖွဈကွပါတယျ။
Resistance Zone ကို ထိပွီး Bounce ဖွဈလာခွငျး
ကွာသပတေးနရေဲ့ အမွငျ့ဆုံးဈေးထိ ရောကျအောငျမတကျနိုငျဘဲ ပွနျကလြာခွငျး
လကျရှိဈေး၏ အောကျဘကျတှငျ Buyer မြားကွီးစိုးရာ နယျမွရှေိနခွေငျး
တို့ကွောငျ့ ဈေးပွနျတကျဖို့ ရှိခဲ့မယျဆိုရငျတောငျ Support Level2နဲ့3အထိ ရောကျအောငျ ဆငျးပွီး ပွနျလညျ အားယူလိမျ့ဦးမယျလို့ ယူဆခငျြပါတယျ။
Weekly Chart နဲ့ လလေ့ာကွညျ့မယျ ဆိုရငျလဲ Triangle Resistance ကို ထိပွီး Bounce ဖွဈလာသော Candle Stick Pattern ဟာ Shooting Star အလှအပကွီး မဟုတျပမေယျ့ Resistance Bounce နဲ့ တှဲပွီး ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျတော့ စိတျဝငျစားစရာ တဈခုတော့ ဖွဈနမေယျဆိုတာတော့ သခြောနပေါတယျ။
ယခု Post လေးဟာ Traders မြားအတှကျ အကြိုးရှိတယျလို့ ယူဆမိရငျ Like, comment, share မြား ပွုလုပျပေးခွငျးဟာ နောကျထပျ TA Post လေးတှေ ရေးဖို့ အတှကျ အငျအားမြား ဖွဈစမှော ဖွဈပါတယျ။
ယနေ့ ရွှေဈေး ငွေဈေးများ (553)
ယနေ့ရွှေဈေး ငွေဈေး (516)
ယနေ့ရွှေဈေး ငွေဈေး များ (473)
ယနေ့ ရွှေဈေး၊ ငွေဈေး (၂၅-၀၁-၂၀၁၈) (463)
XAUUSD (Daily) 28-01-2018 (249)